समाचार – Page 392 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०१:५७ English
मधेशको प्राकृतिक श्रोत जल, जमिन र जंगल मधेसीबाट खोसियो : ठाकुर १८ चैत्र २०६८, शनिबार १८:१०
संघियता नभए मधेश टुक्रिने मधेसी मोर्चा नेताहरुको चेतावनी
काठमाडौ, १८ चैत । शान्तिप्रक्रिया तोकिएकै समयमा पूरा गरेर सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले मधेसी मोर्चाले आज राजधानीको खुल्ला मञ्चमा प्रर्दशन सहित आमसभा गरेको छ । आमसभा अघि राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट मोर्चामा आबद्ध राजनीतिक दल तथा तीनका भ्रातृ..
पश्चाताप, क्षमादान, परिपूरण र कारावाहीको आधारमा सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग गठन गरिने
काठमाडौ, १८ चैत । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानवीन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारितका संसदमा पेश गर्न मुख्य तीन सहमत भएका छन् । आज बिहान मुख्य दलहरू एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच भएको बैठकमा भाषासम्बन्धी विवाद र आयोगका..
महोत्तरीको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय शक्तिशाली बम विष्फोट
महोत्तरी, १८ चैत । महोत्तरीको जलेश्वरस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आज बिहान अज्ञात् समूहले शक्तिशाली बंम विष्फोट गराएको छ । बम विष्फोटबाट ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन क्षतिग्रस्त बनेको छ भने भ¥याङ र शौचालय घर पूर्णरूपमा भत्केको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी..
मधेसी मोर्चाले राजधानीमा प्रर्दशन र सभा गर्दै
काठमाडौ, १८ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आज राजधानीमा प्रदर्शन तथा आमसभा गर्दै छ । शान्तिप्रक्रिया तोकिएकै समयमा पूरा गरेर सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन तथा आमसभा गर्न लागेको मोर्चाले जनाएको छ । सङ्घीयताविनाको संविधान ल्याउने..
आज चैते दसैँ र रामनवमी पर्व मनाइँदै
काठमाडौ, १८ चैत । आज चैत्राष्टमी अर्थात् चैते दसैँ पर्व, दुगौ भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै छ । यस अवसरमा राजधानी र अन्यत्रका विभिन्न शक्तिपीठ तथा मन्दिरहरूमा शक्तिस्वरुपा भगवतीको दर्शनार्थ बिहानैदेखि भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ । आज भगवतीका मन्दिरहरूमा पूजापाठको साथ पशुबली..
देशको राजनीतिक उपचार देशभित्रै गर्नुपर्छ: एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल १७ चैत्र २०६८, शुक्रबार २२:०९
काठमाडौ, १७ चैत । नयाँदिल्लीमा स्वास्थ्य उपचार सकेर शुक्रबार स्वदेश फर्किएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले देशको राजनीतिक समस्याको समाधान विदेशमा होइन देशभित्रै खोजिनु पर्ने बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मिहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष खनालले आफूले..
माओबादी झगडाले सरकारको आयु बढ्यो
काठमाडौं, चैत १७ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार भ्रष्टचारले गन्हाएका सहयात्री मधेशी दल,भ्रष्ट र बदनाम उपप्रधानमन्त्री बिजय गच्छेदार र आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सम्पति र सत्ता मोहका कारण बद्नाम भए पनि संबिधान सभाको म्याद मात्र दुई महिना बाँकि रहेको र..
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सुदूरपश्चिम भ्रमणमा: राजा हेर्न मानव सागर उर्लियो
महेन्द्रनगर, १७ चैत । सुदूरपश्चिम भ्रमणमा रहनु भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो भ्रमणको दोस्रो दिन उर्लिएको स्थानीय मानवसागरका विच कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरको सिद्धनाथ मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नु भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्ला..
लडाकु समायोजनाको मापदण्ड आज सार्वजनिक हुने
काठमाडौ, १७ चैत । माओवादी लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने मापदण्ड तथा कार्ययोजना आज सार्वजनिक हुने भएको छ । लडाकुले पाउने दर्जा, मापदण्डको बारेमा दलहरु सहमति नजिक पुगेकोले समायोजनको मापदण्ड आजै सार्वजनिक हुने संभावना बढेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । कार्ययोजना तथा..
शान्ति र संविधान निर्माणमा ठोस निर्णय गर्न प्रमुख तीन दलको बैठक जारी
काठमाडौ, १७ चैत । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको बारेमा ठोस सहमति गर्ने प्रयासस्वरुप प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक अहिले बसिरहेको छ । आगामी जेठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद थप्ने कानूनी बाटो सार्वोच्च अदालतको फैसलाले बन्द गरिदिएपछि दलहरु औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा..
हौसिए बाबुराम तर कहिलेसम्म ? १६ चैत्र २०६८, बिहीबार १९:५५
देवप्रकाश त्रिपाठी,काठमाडौ, १६ चैत । ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ‘हावा भरिएको बेलुन’जस्तो हुन पुग्नुभएको छ । उहाँले तत्काल आफ्नो विकल्प नरहेको ठान्न थाल्नुभएको छ र स्थायी सरकारका..
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह देश दौडाहामा; बिहीबार धनगढीमा नागरिकद्वारा भब्य स्वागत
धनगढी, १६ चैत । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह देश दौडाहाका क्रममा बिहीबार धनगढी पुगेका छन् । पूर्वराजा शाह स्थानिय मन्दिरहरुमामा पूजापाठ गर्ने क्रममा धनगढी पुगेका हुन् । बुद्धएयरबाट बिहीबार धनगढी पुगेका पूर्वराजालाई विमानस्थलमा राजावादीले भब्य स्वागत गरेका थिए । पूर्वराजा..
तोकिएको समयमै संविधान बनाउन सभासद्हरूको जोड
काठमाडौ, १६ चैत । विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद्हरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमै संविधान बनाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । संविधानसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकाशं सभासद्हरुले तोकिएको समयमै संविधान निर्माणमा जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने बताएका हुन् । नेकपा..
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धिको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा एक घन्टा चक्काजाम
काठमाडौ, १६ चैत । सरकारले पछिल्लो पटक पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ बढाएको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले आज एक घन्टा चक्काजाम गरेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनले बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म राजधानीका शैक्षिक संस्था अगाडि चक्काजाम गरेका हुन् । अनेरास्ववियु आरआर क्याम्पसका..
संविधानसभामा थप एक दिन राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी रहने
काठमाडौ, १६ चैत । राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा जारी छलफल अझै एक दिन लम्बिने भएको छ । आजसम्मकोलागी छलफलको समय तोकिए पनि सभासदहरुले धारणा राख्ने क्रम नसकिएकोले भोली एक दिन थप छलफल गर्न लागिएको हो । आजको बैठकमा सभासद्हरुले राज्य पुनःसंरचना आयोगको..